Eji mkpuchi kịịlịkọn maka ụgbọ egwu
Nkọwa:Ahịa Silicon Key for Cruze,Ejiji Silicon Key Shell,Ahịa Silicon Key for Carze Car
Home > Ngwaahịa > Cover Cover Silicone Key Chevrolet > Eji mkpuchi kịịlịkọn maka ụgbọ egwu
Ihe Nlereanya.: Cruze
Inye Ike: 2000000 per weeek
Akwụkwọ: FAD SGS
Mara mma Earth co.Ltd tumadi na-emepụta Silicone Car Key Cover asaa years.So ọtụtụ afọ ahụmahụ na-eme ka anyị mịa. anyị elu àgwà obi na-emetụ Silicone Car Key Ileba na ruo na ntinye ederede n'otu ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwere aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị maka Silicone Car Key Case n'ihi ọrụ anyị zuru oke, ngwaahịa ngwaahịa na asọmpi asọmpi. Anyị bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi na-ere Chevrolet Silicone Key Cover .
Onye ọ bụla dị na Silicone Car Key Holder nwere atụmatụ ndị a:
1. Emere 100% silikọn
2. Ihe mkpuchi ụgbọala Silicone na-adabara adaba maka igodo ụgbọala gị .
3. Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla nwere ike ịme mkpuchi nke mkpuchi akpaaka ma ịchọrọ.
4. Anyị nwere uru ọnụọgụ nke mkpuchi siliki ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu.
5. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 330 centigrade.
6. Ileba ụgbọala dị na Silicone nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi enyi na enyi, okpomọkụ na-eguzogide, ihe siri ike, mmiri na-adịghị ahụkebe, ihe nkwụ.
Ihe mkpuchi mkpuchi silik car Cruze abụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị na-echekwa gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide ihe mkpuchi key silk n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga-ahụ ihe nkwado ụgbọ ala akpaaka akpaaka mgbe ị nwere ya.
Nkọwapụta nke n'ihu na azụ n'akụkụ Chevrolet mkpuchi mkpuchi silicone
Ụlọ ọrụ anyị dị na Shenzhen maka Silicone Car Key Cover na mkpuchi Silicone Steering maka afọ 8. Site na nkwekorita mbụ iji nweta ngwongwo, ihe niile mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị. Yabụ àgwà ị na-echegbu onwe gị, na oge ịnyepụta oge na-adịkwa ngwa ngwa. ndị ọrụ anyị niile bụ ndị ọkachamara iji na-ere ngwaahịa maka ndị ahịa niile.
1. 1. akpa akpa akpa akpa akpa ụgbọala
2. 1000pcs silicone akpa akpa akpa ke kiet ke otu katọn
3. katọn size: 58 * 26 * 38cm
ụlọ ọrụ anyị bụ ISO9001, BSCI. otú ahụ ị na-amasị ihe onwunwe anyị?
Ngwaahịa : Cover Cover Silicone Key Chevrolet
Ndabe Nchedo Car Car Silicone Case For Chevrolet Kpọtụrụ ugbu a
OEM Silicone Funny Car Key Cover maka Chevrolet Kpọtụrụ ugbu a
Silicone Rubber Car Cover Cover maka Chevrolet Kpọtụrụ ugbu a
Omenala Chevrolet Silicone Car Key Cover Kpọtụrụ ugbu a
2018 Hot ere Silicone ụgbọ ala isi shei nnọchi Kpọtụrụ ugbu a
Silicone dịpụrụ adịpụ Chevrolet Car Cover Cover Kpọtụrụ ugbu a
2018 New Chevrolet Replacement Car Cover Cover Kpọtụrụ ugbu a
Igwe mkpuchi Silicon Key Chevrolet Cruze Kpọtụrụ ugbu a
Ahịa Silicon Key for Cruze Ejiji Silicon Key Shell Ahịa Silicon Key for Carze Car Ahịa Silicone Key Covers Ahịa Silicone Car Key Fob Case Ahịa Silicone Car Key Case Ahịa Silicone Car Key Cover Ahịa Silicon Key na Akara